Idozi Nsogbu WhatsApp Vidiyo Na Windows - Nwalee igwefoto gị n'ịntanetị wee chọta ntuziaka iji dozie ya
Idozi Nsogbu WhatsApp Vidiyo Na Windows
Jiri ngwa ịntanetị a nwalee igwefoto gị wee chọta ụzọ iji dozie nsogbu vidiyo WhatsApp na Windows
Iji jiri ngwá ọrụ a, ị ga-ekwenyerịrị na Usoro ọrụ na Amụma nzuzo.
Okwu mmalite nke ngwa ịntanetị Nnwale Ntanetị Weebụ
Nnwale kamera na-enye gị ohere ịnwale igwefoto gị na ihe nchọgharị gị. Ọ na-enyekwa ntuziaka iji dozie igwefoto gị n'ọtụtụ ngwaọrụ yana ọtụtụ olu na oku vidiyo.
Enwere ọtụtụ ihe kpatara igwefoto gị agaghị arụ ọrụ. Nwere ike ịnwe nsogbu igwefoto ma ọ bụrụ na ngwa eji igwefoto enweghị ntọala ziri ezi. Ma ọ bụ igwefoto nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ ọ bụla na ngwaọrụ gị, n'agbanyeghị ngwa ị na-eji.
Mgbe ịmalite ule ahụ, ọ bụrụ na igwefoto gị na-arụ ọrụ ị ga-ahụ na ihe nchọgharị gị vidiyo nke igwefoto ahụ na-ejide. Ọ bụrụ na igwefoto gị anaghị arụ ọrụ, ị ga-ahụ ozi ezighi ezi. N'ọnọdụ ahụ ị nwere ike ịlele ntuziaka iji dozie nsogbu igwefoto akọwapụtara na ngwaọrụ gị ma ọ bụ ngwa gị.
Site na kamera anyị na-anwale nzuzo gị kpamkpam: enweghị vidiyo vidiyo na-eziga na ịntanetị. Lelee ngalaba "Enweghị nnyefe data" n'okpuru iji mụtakwuo.
Anyị na-emepụta ngwaọrụ ịntanetị echekwabara nke dabere na ígwé ojii ma ọ bụ na-arụ ọrụ na mpaghara gị na ngwaọrụ gị. Ichekwa nzuzo gị bụ otu n'ime ihe na-echegbu anyị mgbe anyị na-emepụta ngwaọrụ anyị.
Ngwa dị n'ịntanetị nke na-arụ ọrụ mpaghara na ngwaọrụ gị adịghị mkpa izipu data gị (faịlụ gị, data ọdịyo ma ọ bụ vidiyo gị, wdg) na ịntanetị. A na-arụ ọrụ niile na mpaghara site na ihe nchọgharị n'onwe ya, na-eme ka ngwaọrụ ndị a dị ngwa ngwa na nchekwa. Iji nweta nke a, anyị na-eji HTML5 na WebAssembly, ụdị koodu nke ihe nchọgharị na-arụ n'onwe ya na-ekwe ka ngwá ọrụ anyị rụọ ọrụ na nso nso-ọsọ.
Anyị na-agbasi mbọ ike ime ka ngwaọrụ anyị na-arụ ọrụ na mpaghara gị na ngwaọrụ gị ebe ọ bụ na ịzere izipu data na ịntanetị dị nchebe karị. Mgbe ụfọdụ, nke a adịghị mma ma ọ bụ kwe omume maka ngwaọrụ ndị dịka ọmụmaatụ chọrọ ike nhazi dị elu, maapụ ngosi mara ọnọdụ gị ugbu a, ma ọ bụ nye gị ohere ịkekọrịta data.
Ngwa ịntanetị anyị dabere na igwe ojii na-eji HTTPS ezobe data ezigara na budata site na akụrụngwa igwe ojii anyị, naanị gị nwere ohere ịnweta data gị (belụsọ na ị họrọla ịkekọrịta ya). Nke a na-eme ka ngwaọrụ anyị dabere na igwe ojii nke ọma.
Maka ozi ndị ọzọ, lee anyị Amụma nzuzo.
Nkọwa njirimara igwefoto
Akụkụ nke mkpebi igwefoto: ya bụ obosara mkpebi nke kewara site na ịdị elu mkpebi
Ọnụọgụ okpokolo agba bụ ọnụọgụ fremu (snapshots static) igwefoto na-ese kwa nkeji.
Ogo mkpebi igwefoto.
Obosara mkpebi igwefoto.
Njikọ ngwa ngwa
Ngwa dabere na igwe ojii ma ọ bụ mpaghara na-arụ ọrụ n'ịntanetị na-ebute nzuzo gị na gburugburu ebe mbụ
Usoro ọrụAmụma nzuzo
© 2022 itself tools. Ikike niile echekwabara.